Asthma-Burmese - Asthma Australia
Home > Asthma-Burmese
Asthma – Burmese
AACALD2020_Burmese_What your doctor needs to know
AACALD2020_Burmese_Asthma Action Plan
AACALD2020_Burmese_10 Ways to Live Well
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များဆိုသည်မှာ သာမန်အအေးမိခြင်းနှင့် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်း အပေါ်ပိုင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ လူအများကို နာမကျန်းဖြစ်စေသည့် ဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုဝင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Coronaviruses areafamily of viruses that make people sick, such as common colds and other upper respiratory tract infections.
COVID-19 ဆိုသည်မှာအခြားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များထက် လူများစွာအား ဖျားနာစေပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော နာမကျန်းမှုများ ဖြစ်စေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ COVID-19 isakind of coronavirus which is causing more people to be sick and develop more serious illness than other coronaviruses.
ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်များသည် ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပိုများနိုင်ခြေ ရှိမရှိဟု အကြံပြုသည့် တိကျသော အချက်အလက်များ ယခုအချိန်အထိ မရှိသေးပါ။ ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်များရောဂါပိုးကူးစက်ခဲ့ရပါက ပြင်းထန်သော နာမကျန်းမှုများ ခံစားရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပိုများနိုင်ခြေ ရှိမရှိကို အကြံပြုရန်လည်း အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးပါ။ There is no specific data as yet to suggest that people with asthma are atahigher risk of contracting the virus. Nor is there any evidence to suggest that people with asthma haveahigher risk of experiencing serious illness if they get it.
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင်များ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့် ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်းအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ထားရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ But we encourage people with asthma and their families and communities to do everything they can to protect themselves and others.
သင့်အန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးသင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင် နေခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် အခြားရေရှည် ရောဂါအခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင် စားသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကိုင်တွယ်စီမံခြင်းတို့အပေါ် အလေးထားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ One of the best things you can do to reduce your risk is to optimise your asthma control and stay healthy. This includes managing other long-term conditions and focusing on eating healthy, exercising and managing your stress.
သင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရာတွင် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ရွက်ရေးစာရင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ – When it comes to managing your asthma, consider the following checklist:
မှတ်ချက် – ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိသူများသည် မိမိတို့၏ ရှူသွင်းရသည့် ပန်းနာရင်ကြပ် ကာကွယ်ဆေးများကို ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည်။ Note: People with asthma should continue to use their inhaled asthma preventer medications as prescribed.
အချို့ရင်းမြစ်များက COVID-19 ကမာ္ဘ့ကပ်ဘေးကာလအတွင်း
“ကော်တီကော်စတီးရွိုက်” သောက်သုံးခြင်းကို ရပ်ထားရန် သင့်အား အကြံပြုထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤအချက်အလက်များသည် သာမန်လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်သာဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ ရောဂါအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် တိုး၍ ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်း (ရုတ်တရက်ထဖောက်ခြင်း) ကို ကုသရန်အတွက်
ကော်တီကော်စတီးရွိုက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာသည်များအား ညွှန်ကြားထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Some sources have recommended that you stop taking “corticosteroids” during the COVID-19 epidemic. But this information is for the general population and is not directed at people with asthma who need to take corticosteroid medication to manage their condition or treat asthma flare-ups (attacks).